မင်္ဂလာပါရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မင်္ဂလာပါရှင်
- လမင္း ေလး
Posted by လမင္း ေလး on Jun 24, 2012 in Cultures | 41 comments
ရွာသူရွာသားအားလုံး ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း
About လမင္း ေလး
လမင္း ေလး has written 1 post in this Website..
View all posts by လမင္း ေလး →
လမင်းလေး ရေ မင်္ဂလာ—– နော်
မှတ်ထားဒီတခါ ငါပထမဆုံးကွ ဖြဲမတို့ဘဲဥတို့ ဗိုက်ဗိုက်တို့ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ငှဲငှဲငှဲ
ဟိတ် တောင်မ ဖိုးထောင်
နေရာမအူးလည်း တစ်ဆယ်ဝင်ယူသွားဒါပေါ့နော် အဟီးးးးး
သဂျီးရဲ့ရွာဂျီးက အခု အဆင့်မြင့် လူအင်အားမြင့်ပြီး မီကြာခင် မြို ့အဆင့် တည်ထောင်လို ့ရတော့မယ်ထင်ပါ့
စိတ်မကောင်းစွာ တစ်ရှယ် ယူသွားပါဦးမယ်..
ကိုယ်လဲ ၁ဝ ယူ ၊ လစ်..
နင်ဟာ အရှုံးတွေထဲမှာ မျောနေခဲ့သူ ငါ့ကို (တစ်)ဆယ် (ပေး)ရင်း..
မျှော်လင့်ခြင်း(သူကြီးဆီက တသိန်း)ကို ငါ့ရင်ဘတ်မှာ တံဆိပ်လိုကပ်ရင်း..
နင်ဟာ ငါ့အတွက်တော့…. .. ငွေလမင်းးး… …..
ရွာစားကျော် တော့ ကျောပြင် ကို ဗျောတင် ခံချင်ပြီ ထင်ရဲ့။ ;-)
လမင်းလေး ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ :-)
ရွာသားတွေ ဝက်ဝက်ကွဲကြိုနေပြီး အဖွားတို့က အသံမထွက်ရင်
ဟိုးရှေးတုန်းက မိန်းကလေးအမည်ရှေ ့မှာ (မယ်) တပ်ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
ဥပမာ။ သီတာ ဆိုရင် (မယ်သီတာ) ပေါ့။
ရွာထဲမှာလည်း နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမ Pooch ဆိုတာ ရှိတယ် ။
သူ့ကို ချစ်စနိုး နဲ့ ( မယ်ပု) လို့ ခေါ်ကြတယ်လေ။
ဆိုတော့… သမီးကို (မယ်လမင်း)လို့ခေါ်ရမလား။
No,no,no… melamine ဖြစ်သွားရင် ဒုက္ခ။
ကြိုပြန်ရင်လဲ တစ်ဆယ်မက်တယ် ပြောခံထိတော့မယ်။
Heartily welcome လုပ်မိပါတယ်..(ရင်ဖွင့်ကြိုဆို=Heartily welcome)
အရီးက ကျောပြင်ကို ဗျောတင်မယ်တဲ့.. အဟင့်
ခု နောက်တယောက် လေးပေါက် က ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလားတဲ့..
လမင်း လေး says:
ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား တို့ …
ကျောပြင်ကိုဗျောတင် လိုက်ရမလား တို့ …
တွေဖတ်ပြီး မန့်ဖို့ တောင် နဲနဲ တွန့်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် မနေနိုင်ဘူး ..မန့်လိုက်ဦးမယ် အာဟိ …
မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက် ခောတ်ဦး MIRC (ygnchat) မှာ အလွန်ခောတ်အစားဆုံး nick name က တော့ အဲ့ဒီ့ လမင်းလေး ပါပဲ။ 2002 လောက်က စပြီး အင်တာနက် သုံး chatting လုပ်နေတဲ့သူတွေ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ …. လမင်းလေး ဆိုတဲ့ nick ကိုတွေ့ရင် စိတ်မခိုင် ပါကြောင်း လေး …. အဲဒါလေး ပါ နော့ ………………………….။
ဪ … ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ..ကိုလုလင်ရေ …. စောစောကပြောရော့ပေါ့ … အခုတော့ဖြင့် အားနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ .. အဟီး …
လမင်းလေးရေ .. ကြိုဆိုပါတယ်နော် … ။
ရွာလည်ထွက်ရင်း ဗဟုသုတတွေရော ၊ ရသတွေပါ ..ခံစားနိုင်ပါစေနော် …
အော် ညလေးရယ် လမင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်ပါ တွေးမနေပါနဲ့ အချွန်ဆိုညလေးဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ပါ အာဟိ လစ်ပြီ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်နေပါမယ် (ဖတ်ဖို့၊ ကြည့်ဖို့)
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ထပ်ကလိုင်လိုက်ဦးမယ်
ရွာသူအသစ်လေးများရောက်ရင် ရွာကကာလသားတွေများ အူယားဖားယား သိပ်နိုင်တာပဲ
လူပျိုးကြီး ဗိုက်ကလေး၊ စောတင်မောင်တို့ထက် ကဲပ့ါ
တော်တော်ကြာ ရွာထဲမဝင်ခင် ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ပြန်ပြေးမှအခက်
အဲ…လောလောဆယ် ၁ဝယူပြီး လစ်ပြီ
ရွာကကာလသားတွေများ အူယားဖားယား သိပ်နိုင်တာပဲ ”
ဟင် ။ နာ့ ကိုများ စောင်းပြောနေတာလား မသိ ။
အူယားဖားယား နိုင်တဲ့ လူပျိုသိုး ဗိုက်ကလေးတော့ရှိတယ်၊ စောတင်မောင်တော့ မရှိသေးဘူး
မင်္ဂလာပါ .. ခုတစ်လော ရွာထဲကို ရွာသူ/သား အသစ်တွေ အများကြီးပဲ ရောက်လာကြတယ်နော် ..
တစ်မြို့တည်း သား သူငယ်ချင်းတွေ ရွာ ကို ပြောင်းလာကြတာလား ဟင်င် ..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ် .. အဲ .. ဓါတ်ပုံပညာကို ဝါသနာ ပါတယ်ဆိုရင်တော့ လစဉ်လတိုင်း ဓာတ်ပုံ ပြပွဲကို 27. -. 2012 ညနေ 5.00 နာရီ နောက်ဆုံးပေးပို့နိုင်ပါတယ် .. ပေးပို့ရမယ့် ခေါင်းစဉ်ကို ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ် ..
ရွာသူချောချောလေးတွေလာရင် ဖြဲမတို့ကတော့ ဟီးဟီး …
မဝမချင်း ငေး နေချင်ပေမဲ့
ခဏ အလင်းလေး ပေးပြီးတော့
ထွက်ပြေးမသွား ပါနဲ့လားကွယ်။ ။
အချိန် ကုန်ဆုံးသွားလို့ တိမ်တွေလွင့်ပျောက်သွားခဲ့ရင်
နောင်တစ်ခေါက် ပြန်လာပြီး ၊အလင်းလေးတွေ ပေးလှည့်ပါဦး။ ။
မမနိုရာရေ………. ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရမှာလေ။ ဟုတ်ဘူးလား။ သတ်ပုံအဖွဲ့မလာခင်ကြိုပြီးစစ်ပေးသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ငြိမ်းလည်း သတ်ပုံအဖွဲ့ထဲ ဝင်လို့ရလားဟင်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဘဲ ပြောစေ…
တဆယ် ဆိုတာထက် ပို၍ မြင်သာထင်သာ ရှိသော ကြိုဆိုမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း လမင်းလေး သိပါစေ သတည်း။
king zawgyi says:
အန်တီ လမင်းလေး ခင်ဗျား
ဟိုလူကြည့် တစ်ဆယ်ယူ လစ်..ဒီလူကြည့် တစ်ဆယ်ယူ လစ်..
သော်တာ လမင်းလေးက ဘယ်မှာ….
ရှာနေပါလဲ………. …………………….. အဟွတ်ဟွတ်ဟွတ်………
လက်စသတ်တော့ လမင်းလေးက ရွာထဲရောက်လာတာကိုး။ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ တစ်ရွာလုံးကို အလင်းရောင်တွေပေးနိုင်တဲ့ လမင်းလေးဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်လျက်ပါနော်……………..
အချိန်တွေတိုင်း ဖွင့်မပြောရဲတာ နင်ဟာငါ့ရဲ.လမင်းတစ်စင်းပါ…
တို့ ရွာ ကြီး ကို ငြိမ်းချမ်း အေးမြ တဲ့ အလင်းရောင် ပိုင်ရှင် အဖြစ် လမင်းလေး ကြိုဆို ပါတယ်။
ဆန်းတခါ ဆုတ်တလှည့် မဟုတ်ပဲ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း တို့ ရွာထဲ မှာ လပြည့်ရက်စွဲ နှင့် သာ နေ နေ ပေး ပါ နော်။
သဂျီးရဲ့ စေတနာ ပွိုင့် ၁ဝ ကလည်း ကြို ဆိုဖို့ တွန်းအားပေးနေတော့ မနေ သာ တော့ ဘူးလေ။
မမ လမင်းလေးကို ကြိုဆိုပါတယ်နော…
လမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ပါ ပြောပါ နှုတ်ဆက်ပါလို့..
ရွာထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါစေ…:)
(လမင်းလေး ဆိုတော့က လမင်းကြီးရော ရှိပါသေးသလား)
နုတ်ခွန်းဆက် မိတ်ဆက်ပြီးရင် ပြန်အုံးမယ်လို့ တော့ နုတ်မဆက်နဲ့နော်
အင်း…..တို့လဲနောက်ရက်ကျရင် မင်္ဂလာပါဗျာ ဆိုပြီး ပို့စ်တင်ဦးမယ ်…..ပြီးရင် ဘယ်သူတွေ လာမန့်လဲကြည့်ရဦးမယ်…….ဟဲဟဲ ရွာသူ တွေကိုပဲ အားကိုးရမှာ …လမင်းလေးကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ် မင်္ဂလာပါဗျာ………ဝဏလဲ လမ်းကြုံလို့ ၁ဝ ဝင်ယူသွားကြောင်း…..
မ င်္ဂ လာ ပါ …..
လေးလုံး ထဲနဲ့ ၁ဝ ရတယ်..ဟိဟိ